Naya Post Nepal | प्युठान दु’र्घ’टना,एकै घरको ३ जनाको मृ”त्यु,बा”रम्बार किन भै रहन्छ यस्तो घ”ट’ना ? खु”ल्यो सो’च्नै न’सकिने र’ह’स्य , (भिडियो सहित हेर्नुस)
प्युठान दु’र्घ’टना,एकै घरको ३ जनाको मृ”त्यु,बा”रम्बार किन भै रहन्छ यस्तो घ”ट’ना ? खु”ल्यो सो’च्नै न’सकिने र’ह’स्य , (भिडियो सहित हेर्नुस)
शुक्रबार साँझ ८ बजेको समयमा प्युठानको गौमुखे गाउँपालिका–६ लिवाङ्गबाट जिपमा विवाहको बाजा तालको गीत घ’न्काउँदै र जन्ती हरु मध्ये युवाहरुले हात नचाउँदै हर्ष’खु’शीका साथ सोही जिल्लाको नौवहिनी गाउँपालिका-६ साविक लुङ गाविस-८ को मौरीझारेटोल स्थित बेहुली लिन पुगेका थिए ।
दु’र्भाग्य उसै दिन राती बेहुली लिएर फ’र्किएका जन्ती चढेको जीप दु”र्घटना हुँदा मृ”त्यु भएका ८ जना मध्ये अधिकांसको श’व लहरै दा’हसंकार गरिएको छ ।शुक्रबार साँझ ८ बजे पछि जन्ती प’र्छियो । जग्गेमा बेहुला बेहुलीलाई राखेर सिन्दुर स’जाउने देखि ढो’गभेट का र्य सकियो । जन्तीहरुलाई खा’नपिन गराईयो ।
२० बर्षीया बेहुली रिमा जिसीका जेठा बाबु डम्वरबहादुर जि’सी भ न्छन्–‘रातको समय पानी पनि परेको छ , आज नजानुहोस, भोली विहानै ब’टाउँला भनेर निकै कर गरियो । जन्तीहरुले मान्दै नमाने पछि राती १० बजेर ५५ मिनेट जाँदा यहाँबाट विदा गरेका हौं । रा तको साढे १ बजे दु”र्घटनाको खबरले हामी भा’ववि’हल भएका छौं । ’
लुङगाउँका समाज सेवी अम्मरबहादर केसीका अनुसार गोविन्दब हादुर जि’सीका दुई छोरा चार छोरीहरु मध्ये बेहुली रिमा माईली छोरी हुन् । जेठीको विवाह भएको छ । हिजो दिदीको विवाहमा लोकन्ती बनेर हिडेकी साईली छोरी १८ बर्षीया विपना जिसीको पनि त्यस दु”र्घटनामा परि मृ”त्यु भएको छ ।
अर्की लोकन्ती वेहुलीकी भाउजु सावित्रा जिसी दु’र्घटनामा परि ग” म्भीर घा’ईते छन् । दुई बहिनीले गाउँकै विद्यायमा कक्षा १० मा पढ्दै थिए ।यहि क्रममा लिवाङबाट केहि दिन अघि रिमालाई मा’ग्न आए ।
केटा केटीको मनपरापर भए पछि बाबु आमले छोरी दिने नि”र्णय सुनाएर माघ २१ विवाहको लगन जु’राईयो । सोही अनुरुप हिजो ह’र्षित र गर्वित बेहुलीका बाबु आमा , हजुर आमा लगायतले आ’ र्शिवाद दिदै टिकाटाला गरेका थिए ।
दुभाग्य: वेहुली छोरी घा’ईते भए पनि अर्की छोरी विपनालाई गुमा उँदा बाबु आमा लगायतको परिवारजन अ’र्धमुर्छित भएका छन् । लिवाङ्गका वासीन्दा तथा वेहुलाका छिमेकी सुरेश बिश्वकर्माका अ नुसार यता २५ बर्षीया बेहुला दानबहादुर खड्काले पनि एउटी स होदर दिदी नन्दी खड्का सहित सबै नजिकका आफन्त गु”माएका छन् ।
उनका अनुसार श्रीमान श्रीमति र छोरी सहित एकै परिवारका तीन जना मृ”त्यु भएका बसन्त खड्का , बसन्ती खड्का र उनकी ११ ब र्षीया छोरी एलिसा वेहुलाका मामाकी छोरी तर्फका दिदी भिनाजु र भाञ्जी हुन् । मृ”तक बसन्त खड्का नेपाली कांग्रेस गौमुखे गाउँपाि लका गाउँ कार्या समित उपसभापति पनि थिए ।
बिश्वकर्माका अनुसार मृ’तक नन्दी खड्का वेहुलाकी काकी हुन् । लुङ गाउँका समाज सेवी अम्मरबहादुर केसीले गएराती विजुवार अस्पतालबाट वेहुलीकी मृ’तक वहिनी विपनाको श’व बुझेर अ” न्त्यष्टि गर्न था’लिएको बताए ।
उता लिवाङ्ग गाउँका मृतक ७ जनाको श’व पनि पो’ष्टमार्टम गरियो । बिश्वकर्मा भन्छन्-‘लिवाङ गाउँका मृ’तक सात जना मध्ये जीप चाल क बलबहादुर बुढा मगरको श’व मगर समुदायको धर्म सं’स्कार र उ नीहरुको प”रम्परा’गत घा’ट अलि माथी लगेर दा’हसंस्का’र गरिएको छ ।
अरु ६ वटा श’व झुम्रिकखोलाको लिवाईदोह घा’टमा लगेर लहरै दा’हसंस्कार गरिएको छ । दु’र्घटनामा परि बेहुलाका स’होदर भाई नरेश खड्का ग”म्भीर घा’ईते छन् ।बेहुला र बेहुली सहित पाँच जना घा’ईतेलाई बुटवल रि’र्फर गरिएको, ती मध्ये बेहुलाको अ’वस्था सा ‘मन्य रहे पनि बेहुलीको
हात चुँ’डिएको र अवस्था ग”म्भीर रहेको प्युठानका प्रहरी प्र’मुख डि एसपी स’त्यना’रायण थापाले जानकारी दिए । बिश्वकर्माका अ’नु सा र बेहुली भि’त्राउन घर स’जाएर बसेका र भोज भतेरको तयारी गरिर हेका बेहु’लाका बाबु आमा घरै थिए ।
दुर्भाग्यः बेहुला र बेहुली यति बेला अस्पतालको शैयामा छ’ट्पटाए’ का छन् । एउटी छोरी केशरी खड्कालाई गु”माए पछि बेहुली भि’त्रा उन सजाईको त्यो घर काज कि’रियाको लागी सो’क मा डु’ब्नु परेको छ.
२०७८ माघ २८, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 150 Views